स्वास्थ्यप्रति कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ ? - परिक्षण - नारी
स्वास्थ्यप्रति कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ ?
घरेलु भागदौड होस् वा अफिसको व्यस्तता। महिलाहरू अनेकौं कारण देखाएर स्वयंको स्वास्थ्यप्रति लापरबाह देखिन्छन्। पठित-अपठित गृहिणी एवं कामकाजी धेरैजसो महिलामा यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ। यसो भन्दैमा सबैजना स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदैनन् भन्नेचाहिँ होइन। आफैंले जाच्नुहोस्, तपाईं स्वास्थ्यप्रति कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ ?
प्रतिदिन आठदेखि दस गिलास पानी पिउनुहुन्छ ?
(ख) लगभग चार गिलाससम्म पिउँछु,
प्रतिदिन घुमफिर गर्न जानुहुन्छ ?
(क) दिनचर्याको अभिन्न हिस्सा हो,
(ख) कहिलेकाहीँ नजिकैको मार्केटसम्म जान्छु,
(ग) छुट्टै समय कहिल्यै पाइँदैन।
हरेक बिहान उठेपछि दुई घन्टाभित्र ब्रेकफास्ट लिनुहुन्छ ?
(क) परिवारसँगै दैनिक रूपमा बिहान ७ बजेतिर लिन्छु,
(ख) कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ,
(ग) समय नै पाउँदिन।
बे्रकफास्ट गर्दा घरको वातावरण कस्तो रहन्छ ?
(क) स्वाद लिएर नास्ता गर्छु,
(ख) काम गर्दागर्दै खान्छु,
(ग) टिभी सामु बसेर एकसाथ धेरै काम सक्ने प्रयास गर्छु।
थकान महसुस गर्दा प्राय: ...
(क) चिकित्सकको अपोइन्टमेन्ट लिन्छु,
(ख) केही समय आराम गर्छु,
(ग) पेनकिलर खान्छु।
प्रतिदिन आफ्नो आहारमा फलफूल, दूध वा मेवा समावेश गर्नुहुन्छ ?
(क) कुनै एउटा फल खान्छु,
(ग) यो सब खाएर मोटाउनु छ र ?
आफ्नो रुटिन मेडिकल चेकअप गराउनुहुन्छ ?
(क) ३-४ महिनामा एकपटक,
(ख) बिरामी हुँदा मात्र,
(ग) म स्वस्थ छु, आवश्यक छ र ?
फास्टफुड खानुहुन्छ ?
(क) १५ दिनमा एकपटक,
(ख) प्राय: घरमै बनाउँछु,
(ग) मलाई धेरै मन पर्छ।
कपडाको साइज मिडियमबाट लार्जमा परिवर्तन हुँदै गएको छ....
(क) चिन्तित हुँदै तत्काल डाइट चार्टको पालना गर्छु,
(ख) ब्रेकफास्ट गर्न छोड्छु,
(ग) मोटोपन घटाउने औषधि अर्डर गर्छु।
(क) अत्यन्त आवश्यक छ,
(ख) नियमित रूपमा गर्न सकिँदैन,
(ग) केही समय गरेर छोड्छु।
मिठाईं कति मन पर्छ ?
(क) उचित मात्रामा, क्यालोरी विचार गरी कहिलेकाहीँ खान्छु,
(ख) पार्टीमा प्राय: खान्छु,
(ग) मिठाईं मेरो कमजोरी हो।
हेल्थ मिटर : अधिकांश उत्तर 'क’ छ भने बधाई छ। तपाईं वास्तवमै आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जागरुक हुनुहुन्छ। अधिकांश उत्तर 'ख’ छ भने तपाईंको बानीले आफ्नो स्वास्थ्य सुन्दर बनाउन त्यति प्रयास गर्नुहुन्न भन्ने बताउँछ। अधिकांश उत्तर 'ग’ छ भने स्वास्थ्यप्रति सचेत नभएको बुझाउँछ। यस्तै गरिरहने हो भने तपाईं गम्भीर रोगको सिकार बन्न सक्नुहुन्छ। अत: समयमै आफ्नो दिनचर्या एवं आहारमा परिवर्तन ल्याएर स्वस्थ बन्न अग्रसर हुनु जरुरी छ।